Tilmaamaha Safarka Xalaasha ee Yokohama Olympic - Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Yokohama
Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Yokohama Olympic
Taariikh: Wed 6 Dhul Qidah 1442AH 16-6-2021AD By Irwan Shah Categories: Japan Tags: #Jafan Safar, Bariga Aasiya No comments
Yokohama waxay dhacdaa Tokyo Bay ee gobolka Kanto waana magaalada labaad ee ugu dadka badan Japan ka dib Tokyo. Waa magaalo madaxda Kanagawa waxayna u adeegtaa sidii xarun ganacsi oo ka tirsan Aagga Tokyo Weyn. Yokohama waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Gateway to Japan', taas oo badanaa sababta oo ah waa mid ka mid ah Japandekedaha maamulaha. Waa magaalo si xawli ah u koraya isla markaana xukunka ganacsiga iyo warshadaha waxaa cad warshadaha, daaqadaha, iyo bakhaarada ku teedsan hareeraha biyaha.
Japan | Xaddidaadaha Safarka ee Covid-19 | Qufulka | Dilaacitaanka fayruuska Corona
Cusboonaysiintii ugu dambeysay: Sebtember 25, 2021 11:15 AM +08
Taariikhda Yokohama waxay muujinaysaa inay ahayd kadib dhammaadkii JapanGo'doominta qaraabada ah intii lagu jiray qarnigii 19aad markii magaaladu ku bilaabatay inay si deg deg ah horumar ku sameyso una soo ifbaxdo sidii Japanmagaalada dekedda weyn. Ilaa dhammaadkii xilligii Edo, Yokohama weli waxay ahayd tuulo yar oo kalluumeysiga uu yahay isha ugu weyn ee dakhliga dadka.
Wax walba way isbadaleen 1853-54 markii Commodore Matthew Perry uu yimid agagaarka Yokohama, isagoo weydiinaya Japan in loo furo dekado ganacsi. Tani waxay dhalisay heshiis (the Treaty of Peace and Amity) oo uu saxiixay Shogunate-ka Tokygawa. Maanta, Yokohama waa mid ka mid ah JapanMeelaha fasaxa ugu caansan ee aad ka heli karto waxqabadyo aad u tiro badan oo la yaab leh, arar iyo dhacdooyin. Goobta juquraafi ahaan waxay ka dhigeysaa wax badan oo caan ku ah dalxiisayaasha. Muuqaalka guud ee gobolkani waa mid dabiici ahaan buuq leh, maaddaama magaaladu ku taallay buuraha Miura iyo Tama. Intaa waxaa sii dheer, Sakai River iyo Tsurumi River sidoo kale waxay maraan gobolkan waxayna gacan ka geystaan ​​sidii cimiladu u noqon lahayd mid fudud oo wacan.
Waqtiga ugu fiican ee la tago
Yokohama waxay leedahay cimilo xilliyeed dhexdhexaad ah, oo la mid ah Tokyo. Heerkulka sanadka oo dhan wuxuu caadi ahaan ku dhow yahay 16 digrii Celsius, isagoo xilliga gu'ga ka dhigaya waqtiga ugu fiican ee la qorsheeyo booqashadaada sida Abriil iyo Maajo, cimiladu aad ayey u wanaagsan tahay. Haddii aad dooratid xagaaga (Juun - Ogosto) inaad booqato waxaad arki doontaa inaad la dagaallameyso kuleylka iyo qoyaanka - sidoo kale waxaad arki kartaa xoogaa roob ah bisha Juun. Xilliga duufaanta ugu weyni waa bisha Sebtember ilaa horraanta Nofeembar jawiguna waa mid aad u qoyan. Haddii kale, waad qorshayn kartaa ciidahaaga inta lagu jiro xilliga qaboobaha - Yokohama waa mid ku dhex jira barafka. Helitaanka Hareeraha Yokohama maahan magaalo aad ugu habboon baabuurta, laakiin ku wareegga waa iska fududahay helitaanka tareenno, basas, doonyo iyo tagaasida. Khadadka tareenka ee 'Minato Mirai 21' ayaa kuu kaxayn doona meelaha ugu wanaagsan ugaarsiga dalxiiska. Bedel ahaan, waxaad isku dayi kartaa Akai Kutsu Bus, oo ah bas indho indheyn ah oo ku siinaya fursad aad ku sahamiso Chinatown, Minatomirai, iyo Motomachi. Intaa waxaa sii dheer, tagaasida Velo sidoo kale waa la heli karaa si ay kaaga caawiso inaad ku safarto aagga dekedda.
Soojiidashada waaweyn iyo Muuqaallada
Waxaa jira dhowr soojiidasho saaxiibtinimo qoys oo ku yaal Yokohama, iyo sidoo kale jardiinooyin kala duwan oo madadaalo ah oo loogu talagalay baaskiilleyda iyo socodka. Waa kuwan soojiidashada yar ee aad ugu raaxeysan karto qaybtaan adduunka ka mid ah. Tower-ka Maraakiibta ee Yokohama wuxuu taagnaa magaalada mudo aad u dheer. Waxay markii hore ahayd laydh, laakiin markii dambe loo rogay Taallada - oo ku beegan sannad-guuradii 100-aad ee furitaanka Yokohama Port. Waxay u adeegtaa sidii soo jiidasho caan ah badanaa iyada oo ay ugu wacan tahay iftiinka LED-ka, kaas oo iftiimiya munaaradda habeenkii. Muuqaalka dusha sare, waxaad aadi kartaa Hoolka Kormeerka, oo qaar ka mid ah 94m dhulka ka hooseeya.
Halkaas, waxaad ku leedahay aragti 360-degree ah aagga Minatomirai 21 oo ay weheliyaan Yamashita, Yamate, iyo Motomachi Area. Xarumaha makhaayada, baarka, iyo makhaayada ayaa ka dhigaya meel soo jiidasho leh oo dalxiis. Beerta Xusuusta Nippon Maru waa mid ka mid ah jardiinooyin badan oo ku yaal Yokohama oo leh 55,000 mitir murabac oo madadaalo ah. Waxaad booqan kartaa markab shiraac ah oo lagu magacaabo Nipponmaru iyo Matxafka Yokohama Minato, oo ay weheliso aag nasasho ah oo ay kuyaalaan joodar cawlan oo qaab fan ah ujeeda dekedda Yokohama. Waxa kale oo aad ka heli doontaa aag caws ah oo si qurux badan loo qurxiyey dusha sare ee madxafkan, kaas oo u adeega mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu daawado habeenkii magaalada. Haddii ay dhacdo inaadan magaalada ka arag dhinac walba, waxaa jira Skywalk. Socodka lugeyntan ee ku teedsan buundada Yokohama Bay Bridge waxay aadeysaa Sky Lounge, oo ah goobjooge wareeg ah.
Ka gudub Daikoku Pier, adoo istaagaya teleskoobyada jidka si aad ugu raaxaysato aragti dhow oo dhow oo ah aragtiyada waaweyn iyo astaamaha magaalada. Meel kasta oo ka mid ah goobaha daawashada ee la soo sheegay, mid ka mid ah astaamaha dhabta ah ee si weyn uga dhex muuqan doona ayaa ah Minatomirai 21. Waa magaalo-yar oo ku taal bad-weynta oo ay ka muuqdaan dhismayaal qarnigii 21-aad ah, oo ay ka mid tahay taawarka ugu dheer Japan. Sidoo kale waa goobta Cosmo World, laba matxaf iyo qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee laga dukaameysto ee magaalada oo ay ku jiraan Landmark Plaza, Red Brick Warehouse iyo Queen's Square. Yokohama Cosmo World had iyo jeer waa xulasho wanaagsan oo loogu talagalay qof kasta oo leh jacaylka jardiinooyinka mawduuca. Waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah giraangiraha Ferris-ka adduunka ugu weyn - dhererkiisu waa 112.5 mitir oo qaadaya 480 rakaab ah. Iyada oo leh baarkinno caan ah oo fara badan, waxay sidoo kale ku habboon tahay bartamaha magaalada. Qof kastaa wuu jecel yahay booqashada xayawaanka. Beerta Xayawaanka Nogeyama waa soo jiidasho bilaash ah oo leh dareen badan oo ah jardiinooyin magaalo leh in kabadan 1,500 oo xayawaan ah oo leh 100 nooc oo kala duwan. Waxay leeyihiin xoolo - yar iyo weyn - oo adduunka oo dhan ka kala yimid. Waxaad ka heli kartaa wax walba min chimpanzees, pandas cas, iyo shinbir mandarin ilaa doofaarada guinea, masaska, iyo qoolleyda fantail.
Booqashada Chinatown sidoo kale waa ikhtiyaar soo jiidasho leh oo loogu talagalay kuwa jecel inay wax ka dukaameystaan ​​oo wax cunaan inta ay ka baarayaan aagga. Waxay ku taal bartamaha Yokohama, waxaad ka heli kartaa dhowr makhaayado iyo dukaanno Shiinaha ah oo ku yaal waddooyinka cidhiidhiga ah ee haddana aadka u midabada badan. Qaar ka mid ah suxuunta ugu caansan waxaa ka mid ah baastada ramenka ah, rootida la kariyo iyo noocyada kale ee shiineeska ah, kuwaas oo si khiyaano leh loogu duubay Japan. Aaggan, waxaad sidoo kale ka heli doontaa macbud midab leh oo dhalaalaya, Kanteibyo, oo asal ahaan ay dhisteen dadka deggan Shiinaha sanadkii 1873. Yokohama International Golf Club waxay leedahay wax kasta oo uu jecel yahay golf-ku jecel. Naadiga golf-ka wuxuu ka kooban yahay laba koorso oo 18-dalool ah, oo leh xarumo tababar oo kala duwan, sida baaxadda wadista, aagga cagaaran iyo bakhaar. Iyada oo leh qurxin qurux badan iyo muuqaal dabiici ah oo aad ku raaxeysan karto, hubaal waxaad waqti fiican uheli doontaa inaad ku luliso naadigaaga koorsadan golf-ka quruxda badan.
Dukaameysiga waa khibrad xiiso leh meel kasta oo ka mid ah Japan. Ilaa iyo inta laga hadlayo dukaamaysiga Yokohama, waxaad ka heli doontaa isku-dhafnaan dukaamo, suuqyo waaweyn iyo dukaamo waddooyin ah si aad wax uga iibsato wax kasta oo aad rabto. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad aag sax ah aado si aad uhesho gorgortanka ugufiican. Meelaha qaarkood waxay caan ku yihiin dalxiisayaasha dukaamaysiga marka loo eego kuwa kale. Tusaale ahaan, waxaad ka heli doontaa dukaamo badan oo wax iibsi oo ka baxsan Saldhigga Shin-Takashima, oo u dhow Saldhigga Bashamichi iyo aagga Kanazawahakkei. Haddii aad rabto inaad iibsato xoogaa koronto, waxaad booqan kartaa Yodobashi Yokohama, oo ah dukaan weyn oo ay ka buuxaan elektiroonig iyo waxyaabo kale oo aan canshuur laga qaadin. Sidoo kale, waxaad aadi kartaa Yokohama Vivre si aad wax ugu iibsato sida ku cad moodadii ugu dambeysay ee Japan.
Minato Mirai 21 waa halka loo tago dukaamaysiga ugu sareeya, laakiin hadaadan rabin inaad jabiso bangiga, si toos ah ugu sii wado Isezaki Mall Shopping Street, oo si fudud looga mari karo Saldhigga Kannai. Iibsiga miisaaniyada, Don Quijote Yokohama west shop store waa xulasho kale oo weyn. Dukaankan silsiladda dhimista ah wuxuu soo bandhigayaa badeecooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin aalkolada, raashinka, badeecooyinka maalinlaha ah, is qurxinta, alaabta xilliga firaaqada ah, dharka, qalabka elektaroonigga ah ee guriga, alaabta gudaha iyo dahabka. Qaar ka mid ah xulashooyinka kale ee wax iibsiga wanaagsan waxaa ka mid ah Dhex-dhexaadinta Dukaammada Dhulka ee 'Diamond Underground Arcade', 'Porta', 'Sotetsu Joinus' iyo 'MyCal Honmoku', oo ah mid weyn, oo ah xarun ganacsi oo u gaar ah Kaliforniya oo leh in ka badan 300 oo maqaaxiyo, shineemo, dukaanno, dukaamo.
Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta ee Yokohama
Hudheelka Zen Yokohama
Hoteelka Monterey Yokohama
Hotelka InterContinental The Grand Yokohama
Hotelka Pan Pacific Yokohama
Yokohama Isezakicho Hotel Washington
Wax kasta oo danta deegaanka ah
Waxyaabo badan ayaa doorbidaya magaaladan quruxda badan, laakiin helitaanka waxyaabo badan oo kadis ah dhacdooyinka iyo xafladaha ayaa ah wax Yokohama ka dhigaya janno loogu talagalay dalxiisayaasha. Wax dhib ah maleh markaad booqato magaalada, had iyo jeer waxaa jiri doona wax xiiso leh oo halkaas ka dhacaya. Kaqeybgalka xafladahaani waa hab fiican oo lagula xiriiro dhaqanka iyo hidaha maxalliga ah iyo kuwa Japan. Aruurinta Dance-ga Yokohama waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu caansan ee maxalliga ah iyo nacnaca indhaha ee dalxiisayaasha. Laga bilaabo 12ka Diseembar, waxay u fidsan tahay 19 Febraayo, inta lagu jiro labadan bilood, waxaad ku raaxeysan kartaa bandhig kooxeed iyo kali kali ah oo ay sameeyaan qoob-ka-ciyaarayayaasha Kuuriya, Jabbaan iyo Pilipino. Qoob ka ciyaarka Dance waa xaflad kale oo qoob ka ciyaar ah oo lagu qabtay Yokohama si loogu dabaaldego sannad-guurada Heshiiska Aasaasiga ah ee u dhexeeya Australia iyo Japan. MOT Annual Festival wuxuu dhacayaa Janaayo wuxuuna ku martiqaadayaa qorayaasha da 'yarta gees kasta Japan.
Yokohama International Costume Parade waa dhacdo kale oo xiise leh oo soo bandhig wanaagsan oo dhaqammada Aasiya ah sida qoob ka ciyaarka masduulaaga Shiinaha ee cajiibka ah iyo sabaynta cajiibka ah. Yokohama Honmoku Jazz Festival waa wax jazz jecel uusan rabin inuu seego. Haddii aad waligaa isweydiisay sida jazz-ka Japan uu uga duwan yahay inta kale tani waa fursad lagu arko sida ay iyagu iskood uga dhigteen. Waxay sidoo kale ku siinaysaa fursad aad kula kulanto qaar ka mid ah fannaaniinta adduunka ugu fiican. Waa inaad booqataa Yokohama bisha Ogosto si aad uga mid noqoto dhacdadan gaarka ah. Yokohama Oktoberfest uma weyna sida aad ku aragto magaalada Munich, Germany, laakiin waa mid la yaab leh qaabkeeda. Yokohama Red Brick Warehouse waa goobta, taas oo sidoo kale ku dhalatay goobta biirka Japan. Bandhiga Farshaxanka Caalamiga ee Kanagawa, OBon, Yokohama International Fireworks Festival, Bashamichi Festival, iyo Joya no Kiteki waa munaasabado kale oo xiiso leh oo laga yaabo inaad ku raaxeysato kana qeyb gasho booqashooyinka Yokohama
Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Fukuoka Olympic
Tilmaamaha Safarka Xalaasha ee Kobe Olympic
Tilmaamaha Socdaalka Xalaal ee Kyoto Olympic
Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Okinawa Olympic
Tilmaamaha Socdaalka Xalaasha ee Osaka Olympic
Tilmaamaha Socdaalka Xalaal ee Tokyo Olympics
Hoteelka Prince Lakeside Annex Hotel Hakone Xalaal Ma Sharcibaa Mise Muslim Saaxiibbaa?
Jal City Yotsuya Hotel Tokyo Xalaal Ma Saxeexan Yahay Mise Muslim Saaxiibbaa?
Hokkaido Hotel Obihiro Xalaal Ma Shahaado Miyaa Mise Muslim Saaxiibbaa?
Hoteel Sunroute Asakusa Tokyo Xalaal Ma Saxeexan Yahay Mise Muslim Saaxiibbaa?
eHalal Safarka Mart > News Latest > Japan > Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Yokohama Olympic
Madaarka Marriott Vancouver	   